Chirwere cheGomarara Chouraya Vanhu Vakawanda muNyika
Muchina wekubatsira kurapa chirwere chegomarara
Chirwere chegomarara chiri kuvhiringidza hupenyu hwevanhu vakawanda sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyaya dzehutano pamwe nehupfumi hwenyika uhwo hwaenda kumawere.
Mumwe wevanhu vari kutambura nechirwere ichi, ndiGogo Vongai Muhwadzarira avo vane gomarara repazamu.
Mbuya Muhwadzarira vanoti vari kugara vaine marwadzo makuru, uye chiremba wavo anoti haaakwanise kupisa chirwere ichi pazamu ravo sezvo vari munhu agara aine chimwe chirwere chemoyo.
Sezvo Mbuya Muhwadzarira vari mumarwadzo, takaona zvakakodzera kuti titaure nemwanasikana wavo, Muzvare Unika Muhwadzarira, avo vari kuvapepa muHarare.
Muzvare Muhwadzarira vanoti havasisina mari yokuti vanachiremba vagadzirise musana wavo uyo wakaremerwa nezamu ravo iro rakazvimba.
Muzvare Muhwadzarira vanoti amai vavo vakaita kapundu pazamu vakaenda kuchipatara chiri kumusha kwavo ndobva vaudzwa kuti vaende kuchipatara chekuru chekuMasvingo.
Asi vanoti kurapwa kwavo kwakadzoserwa shure nekuratidzira kwaiita vana chiremba vemuzvipatara zvehurumende ndokubva Muzvare Muhwadzarira vafunga zvokuti amai vavo vauye kuHarare kuti vazovarapisa kuna chiremba wavo.
Muzvare Muhwadzarira vanoti panodiwa mari inosvika zviuru zviviri nemazana mana emadhora ekuAmerika, US$2400, kuti vambotanga vamborapwa zvimwe zvir ikuvanetsa vasati vapiswa gomarara repazamu.
Muzvare Muhwadzarira vanoti havasati vave kuziva kuti gomarara rezamu iri rakomba zvakadini nokuti havasisina mari yokuti vaende kwaChiremba asi vanoti zironda racho riri kuramba richikura zvokuti ranyenga zvokusachatarisika.
Muzvare Muhwadzarira vanoti amai vavo vanongorara nekuswera vachichema nemarwadzo eronda iri zvokuti vanotoita zvekusimudzwa kuti vaende kunozvibatsira kuchimbuzi nokuti havachisina simba racho.
Muzvare Muhwadzarira, avo vaitosvimha misodzi pavaitaura nyaya iyi, vanoti chirwere chegomarara chinodhura kurapisa zvokuti vave munhu angopererwa nepfungwa nokuti havachaziva kuti voita sei nokuti havasisina mari.
Mukuru wesangano reCancer Association of Zimbabwe, Amai Junior Mavhu, vanoti chirwere ichi ndicho chechitatu pamagomarara ese anobata vanhukadzi muZimbabwe.
Amai Mavhu vanoti paongororo yavakaita mumwedzi waGumiguru gore rakapera, vakaona vakadzi nevarume vakati wandei paguva yaicherechedzwa chirwere ichi pasi rose, avo vaiva nemapundu mumazamu airatidza kuti aigona kuita kunge aiva magomarara emuzamu.
Amai Mavhu vanoti panoda dzidziso yakanyanyisa yokujekesera vanhu munyika kuti mukadzi akabviswa
Imwe nyanzvi munyaya dzehutano, Dr Mudavanhu, vanoti gomarara repazamu neremuromo wechibereko ndiwo akafararira muvarapwi vemagomarara ose, uye vanoti magomarara aya anokwanisa kurapwa zvokutopera kana madzimai akakurumidza kuenda kunoongororwa kuzvipatara nemakiriki.
Vanotiwo munhu wese anofanira kuongororwa kuona kuti hapana here vamwe vemumhuri vakamborwara nezvirwere zvegomarara nokuti izvozvo zvinokwidza mukana wokuita zvirwere zvegomarara .
Mukuru weNational Cancer Registry ririvpasi pebazi rehutano, VaEric Chokunonga, vanoti vanhu vakawanda vanozotsvaga rubatsiro chirwere chegomarara chakomba zvokuti panenge pasisina chokuita sezvo muviri wese unenge waparara nacho.
VaChokunonga vanoti ongororo yavakaita inoratidza kuti magomarara ari kunyanya kunetsa veruzhinji munyika anosanganisira gomarara remuromo wechibereko nerepazamu kumadzimai, kwotiwo gomarara resikarudzi kana, kana kuti prostate cancer, kuvarume.
Vaimbove gurukota rehutano, Dr Obadiah Moyo, vakamboudza nhengo dzeSenate gore rakapera kuti vanhu zviuru zvishanu vari kubatwa nemagomarara akasiyana siyana pagore rega rega munyika uye vanhu vanodarika chiuru nemazana mashanu vari kufawo nechirwere ichi pagore rega rega.